Iitanki zensimbi iBrazing kunye ne-Induction Heating-HLQ induction brazing tank
Ikhaya / izicelo / Ukukhangela ibhola / Iitanki zensimbi zeBrazil kunye ne-Induction
Udidi: Ukukhangela ibhola tags: iitanki zentsimbi zobhedu ngoqheliso, amatanki obhedu, thenga iitanki zentsimbi heater, iitanki zegesi zokungenisa ibhondi, Amatanki e-HF brazing, iitanki zentsimbi zobhedu, iitanki zokubamba, induction iitanki zentsimbi heater, Iitanki zeoyile zokungenisa ibhondi, iitanki zentsimbi, iitanki zentsimbi zokufudumeza
Iitanki zensimbi zeBrazil kunye nokuFudumeza ngokuFudumeza
Injongo yesi sicelo kuku induction braze itanki lesinyithi yesilinda yoShishino lweoyile neGesi. Umthengi, umenzi wetanki ye-propane, ufuna ukusebenzisa ukufudumeza ubushushu ukuphucula inkqubo yokuvelisa kunye nokwandisa ukusebenza kwamandla ngokutshintsha ubushushu besiko.
I-DW-HF-45 kW inkqubo yokufudumala isetyenziswe kwesi sicelo.
Itanki yentsimbi ibibekwe ngaphakathi kuyilo olwenziwe ngokwesiqhelo iikhoyili zokufudumala. Iqondo lobushushu elifunekayo lafikelelwa kumandla angama-40 kW kwimizuzwana eli-15 efikelela kubushushu obungu-800 ° C (1472 ° F).
Icandelo: Umzi mveliso weoyile kunye neGesi, imibhobho, inqanawa, itanki, ibhoyila okanye eminye imisebenzi yesinyithi